Vehivavy anjely Average 4.3 / 5 avy amin'ny 25
Faha-76, manana fomba fijery 69.4K
Vakiana ianao Vehivavy anjely, mahafinaritra manhwa.
Namako i Angela. Te hanome zavatra ho azy aho, izay noheveriko ho sarobidy kokoa noho ny fianakaviako. Ary navadiko i Angela, aristocrat ambany avy any ambanivohitra, ho vonin'ny fiarahamonina kapitalista. Saingy famadihana no niverina. Namidiny izaho sy ny fianakaviako mba ho lasa andriambavy imperial. “… Tsy maintsy nandeha hatreto ve ianao?” “Satria tiako tsy ho sambatra ianao. Te hiala amin'ny fiainanao manontolo aho. ” Saingy rehefa nieritreritra aho fa maty teo ambanin'ny guillotine, dia nahagaga fa niverina aho tamin'ny lasa. “Oh, hello. Angela Vito no anarako… ”“ Angela ianao! Faly mahalala anao. Niandry anao ny rehetra. ” Tamim-pitsikiana mamirapiratra no nihazonako ny tanany indray.
Chapter 60	Novambra 14, 2021
Chapter 59	Novambra 14, 2021
Chapter 58	Novambra 14, 2021
Chapter 57	Novambra 13, 2021
Chapter 50	Septambra 25, 2021
Chapter 49	Septambra 25, 2021
Chapter 48	Septambra 18, 2021
Chapter 45	Septambra 18, 2021
Chapter 43	Septambra 18, 2021
Chapter 42	Septambra 18, 2021
Chapter 41	Septambra 18, 2021
Chapter 40	Septambra 18, 2021
Chapter 39	Septambra 18, 2021
Chapter 38	Septambra 9, 2021
Chapter 37	Septambra 9, 2021
Chapter 36	Aogositra 6, 2021
Chapter 35	Aogositra 6, 2021
Chapter 34	Aogositra 6, 2021
Chapter 33	Aogositra 6, 2021
Chapter 32	Aogositra 6, 2021
Chapter 31	Aogositra 6, 2021
Tsia, vadiko mpilalao sarimihetsika tsara indrindra